Ogaden News Agency (ONA) – OYSU Koonfur Afrika oo ka qeyb qaatay Buug laga qoray Afrika iyo Marxalada Ogadeniya
OYSU Koonfur Afrika oo ka qeyb qaatay Buug laga qoray Afrika iyo Marxalada Ogadeniya
Ururka dhalinyarada iyo Ardayda Ogadeniya OYSU ee Magaalada Cape Town ayaa Waxay qayb wayn kaqaateen qoraalka iyo soo shaacbixinta Buuga ay qortay hayada Trauma centre buugan oo loogu magac daray kuwada noolaan ciida Africa, living together on African soil. Buugan ayaa waxaa laga qoray 32 ruux oo isugu jira South African iyo African kale waxaana kamid ahaa oo qayb wayn ka qaatay laba xubin oo u dhalatay Ogadeniya xoghaya OYSU Cape Town mudane abshir Mohamed fatule iyo Mohamed qani sheikh. Buugan ayaa waxaa lagaga hadlay dhibaatooyinka ay kasoo qaxeen qaxootiyadu, iyo dhibaa tooyinka ay lawadaagaan dadka wadaniga .
Isaga oo ujeedada laga lahaa ay ahayd in dadka wadaniga ah iyo ajaanibtu ay kuwada noolaadaan nabad galiyo.
Mudane Abshir fatule ayaa waxuu kaga hadlay buugan dhibaatada ka jirta Ogadeniya iyo waliba khayraadka Ogadeniya.
Project tigan oo ay fangaraysay hayada caalamiga ah ee foundation for human rights ayaa Waxuu socday muda laba sano ah 2011-2012 waxaana lasoo shaacbixiyay buugii laga qoray 14/08/13.
Waxaa xafladan furtay Sharon vermaak oo ah project leader waxayna soo dhawaysay Dhamaan kasoo qayb galayaashii launch ga buugan, oo ay kasoo qayb galeen araday ka kala socotay 5 Dugsi (School) oo ka mid ahaa dugsiyadii ay dayartani kasoo jeediyeen, presentation-anada Buuga lagasameeyay sanadadii lasoo dhaafay.
Waxaa kale oo iyana goob jooga ahaa madax kasocota dawlad goboleedka Western Cape iyo hayadaha xuquuqul insaanka gobolkan.
Soodhawayn kadib waxay kusoo dhawaysay veldi oo ah director ka trauma centre, valid ayaa waxay mahad usoo jeedisay dhamaan kasoo qayb galayaashii waxayna kudheraatay sida daacadnimada leh ee ay dhalinyaradu uga qayb qaateen utaagnida xuquuqda aadamaha,iyada oo ku dheeraatay abshir athenkosi iyo Ronald oo kasoo kala jeeda,wadamada southa Africa,Ogadeniya iyo Uganda.
Kuna tilmaantay mustaqbalkii Africanka,valid ayaa waxay xustay sida dhiiran ee ay utageen dugsiyada iyaga oo lawadaagaya caqabadaha haysta dhamaan buslshada Afrikaanka ah.
Waxayna ku nuuxnuuxsatay in wax qabadkoodu uugalay taariikhda isbadalna uu keenidoono iyada oo sheegtay in ay diyaar u tahay in ay diyaariso buugii labaad oo ka hadalaya qaarada Africa.
Intaas kadib waxaa lagusoo dhaweeyay Abshir Mohamed fatule oo warbixin dheer oo Ogadeniya kusaabsan kasoo jeediyay madashaas, kan hadlay si waafi ah xaalada Ogadenia waxaana hadalkiisii kamid ahaa.
Mudane Abshir ayaa ka hadlay dhibaatooyinka gumeysi ee shacabka Ogadeniya heysta iyo taariikhdi dhulka Ogadeniya, Kheyraadka Ogadeniya iyo dadkaas sida loo waxyeeleeyo, sdoo kale waxyaalaha sababay in Shacabka Ogadeniya qaxoonti ahaadaan muddo 50 sanno dhan.
OYSU Capetown Mashruuxyada ay gacanta ku hayaan
OYSU Cape Town ayaa waxay sidoo kale u diyaar garoobayaan, ka qaybgalka sanad guurada jwxo,dood cilmiyeed International criminal court, oo ay kasoo qayb galayaan madax kasocota foundation for human rights oo ay qabanayso centre of conflict resolution 22 bishan iyo dood cilmiyeed kale oo isla xaruntu qabanayso oo lagaga hadlayo siyaasada iyo awooda madaxda iyo wadamada Africa 28 bishan.